အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း Bold News – May 2018 မေ ၂၀၁၈ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Choice » အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း Bold News – May 2018 မေ ၂၀၁၈
အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း Bold News – May 2018 မေ ၂၀၁၈
Posted by kai on May 8, 2018 in Editor's Choice, Myanmar Gazette | 15 comments
အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း - မေ ၂၀၁၈
U.S. ပြည်နယ်အသီးသီးက မြန်မာသင်္ကြန်ပွဲတော်သတင်းနှင့်ဓာတ်ပုံများ။
မောင်စွမ်းရည်ရဲ့ “မန်းတက္ကသိုလ်ကလောင်ရှင်အသင်း-၂” ဆောင်းပါး။
ငြိမ်းမင်း(၇၉မြို့ပြ) ရဲ့” မြန်မာနှင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများဆက်ဆံရေး”
မောင်မိုးညိုရဲ့ “Credit ကို အကြွေးဟု ဆိုကြသူတွေ “ဆောင်းပါး။
“မေအလှပန်း” Hnin Nandar
မသန္တာအောင်(ဆေးပညာဘွဲ့)ရဲ့ “ဒူးနာရောဂါများ” ဆေးပညာဆောင်းပါး။
KZ ရဲ့”အေးမွေ့ချို ” Smoothie လုပ်နည်း။
လစဉ်ဖော်ပြနေကျဆရာမျိုးကျေ်မြင့်ရဲ့ “အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါတတ်ကျွမ်းလိုသော်” အင်္ဂလိပ်စာသင်္ခန်းစာဆောင်းပါး။ ကဗျာ။ ကာတွန်း။ ဆောင်းပါး။ ဗေဒင်။ ကမ္ဘာ့အရေး။ မြန်မာ့အရေး။ ဓာတ်ပုံဝေေ၀ဆာဆာဖြင့် မေလထုတ် မြန်မာ့ဂဇက်ထွက်နေပါပြီ။ မြန်မာဆိုင်များနှင့် မြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်းများမှာ အခမဲ့ ရယူပါ။
Kai has written 958 post in this Website..
အမေရိကားရဲ့ ပြည်နယ်တခုပါ..။ ဒါပေမယ့်.. ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းကိုကျော်သွားပြီး.. ပဉ္စမမြောက်ကိုရောက်လာတာဖြစ်ပါကြောင်းနဲ့.. ရှေ့မှာ နိုင်ငံတွေအနေနဲ့.. ယူအက်စ်။ ချိုင်းနား၊ ဂျပန်နဲ့ ဂျာမဏီ သာရှိတော့ပါတယ်..တဲ့..။
အင်္ဂလန်တို့ရဲ့.. ဘီဘီစီက.. အမေရိကားကို.. အမေရိကန် အတင်းလုပ်နေရင်းနဲ့ပဲ… ကယ်လီဖိုးနီးယားက.. သူတို့ကိုကျော်တက်သွားတာဖြစ်ပါကြောင်း.. ကယ်လီဖိုးနီးယန်းတဦးအနေနဲ့ ရေးလိုက်ရပါတယ်… လို့စ်..။
California is now the world’s fifth-largest economy, surpassing United Kingdom
MAY 04, 2018 | 1:50 PM
California’s economy has surpassed that of the United Kingdom to become the world’s fifth largest, according to new federal data made public Friday.
California’s gross domestic product rose by $127 billion from 2016 to 2017, surpassing $2.7 trillion, the data said. Meanwhile, the U.K.’s economic output slightly shrank over that time when measured in U.S. dollars, due in part to exchange rate fluctuations.
လက်စသတ်တော့ ဒို့သူကြီးက မီယမ်မာ+ကယ်လီဖိုးနီးယန်းပဲ
ခေါက်နေသော ဘီဒို…. တဲ့.။ အောက်မှာ မူရင်းပို့စ်..။
Hla Win Aung was live.
on Sunday May 13 2018·
ဒါက.. ပန်ဆယ်လိုရဲ့.. ထောက်ပို့… ပို့စ်…။
ရွှေမှုံရတီရဲ့.. သင်္ကန်းကပ်ဇတ်လမ်း.. မှတ်တမ်းထားပါတယ်..။
May 15 at 8:57pm ·
သရုပ်ဆောင် ရွှေမှုံရတီ က သူမရဲ့ မွေးနေ့အဖြစ် ဒီကနေ့ မေလ (၁၆) ရက်နေ့က အောင်ဇမ္ဗူတောရကျောင်းတိုက်မှာ အလှူပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ခေးလေး ကိုပဲ ပြောနေဂျဒါပဲ။
ပိုက်ဆံမြန်းရှိရင် ခေးကို မြန်မာပြည်မှာ မထားဘူး သိရဲ့လားး
Israel Said 32 Countries Confirmed They’d Attend U.S. Embassy Gala. Here’s Who Really Came
After Foreign Ministry published initial attendance list, several countries – including Serbia, Vietnam, Peru, El Salvador and the Ivory Coast – denied they had confirmed their attendance and said they weren’t planning to attend
Noa Landau May 17, 2018 2:32 PM
Twenty-two foreign envoys attended the Foreign Ministry reception on Sunday in honor of the U.S. Embassy’s move to Jerusalem the following day, according to the final list of participants submitted to Haaretz at its request. Before the event, the ministry had said 32 foreign representatives had confirmed they would attend, of the 86 who were invited.
Besides the four representatives from Austria, Hungary, Romania and the Czech Republic, which bucked the European Union’s stance against the U.S. Embassy move, ambassadors or other representatives attended from the following countries: Guatemala, Paraguay, Honduras, Bosnia and Herzegovina, Georgia, Macedonia , Myanmar, Angola, Cameroon, Democratic Republic of Congo, Republic of the Congo, Dominican Republic, Ethiopia, Kenya, Nigeria, Rwanda, Zambia and Tanzania. The other EU nations boycotted the reception.
ပထမဆုံး… ချိတ်ဆက်တိုးထိမ်း Blcokchain ဖုံး.. HTC ထုတ်..။
HTC Unveils Exodus, the First Blockchain Phone By Shobhit Seth | May 16, 2018 — 1:29 PM EDT
The Taiwanese electronics manufacturer HTC Corp. on Tuesday unveiled its Exodus smartphone. The blockchain-powered smartphone, which runs on Google’s Android mobile operating system will haveauniversal digital wallet and hardware support for cryptocurrencies and decentralized apps (dApps). It will act asaconvenient handheld device that will serveadual purpose: asaconnecting point to the world of decentralized networks onauser’s mobile, and asastorage device for the users willing to carry their cryptocoins with them in their pockets.
Blockchain Phone Expected by Year-End
The phone is expected to be made available by the end of this year. During the initial launch, the phone will have support for bitcoin, ethereum andafew other major blockchain networks. HTC will bring in support for other networks later on inaphased manner.
It is being built to provide enhanced security foravariety of digital assets that can be stored in the handheld device and will offer the convenience to use that many other present-day digital wallets lack. The smartphone will also feature an API that will allow developers to build additional apps based on the networks integrated with the blockchain-supported ecosystem.
Read more: HTC Unveils Exodus, the First Blockchain Phone | Investopedia https://www.investopedia.com/news/htc-unveils-exodus-first-blockchain-phone/#ixzz5FnbKGuyz
ခရိုင်းမီးယန်းနှင့် တရုတ် tatar တို့၏ခရိုင်းမီးယား ရုရှားအောက်အပြီးရောက်.. တံတားလည်းဖောက်ပြီးခဲ့လေပြီ..။
Bridge connects annexed Crimea to Russia – and Putin toadream dating back to the last Tsar
The controversial 19km bridge will be the longest in Europe and has become an important symbol for the Russian president
PUBLISHED : Tuesday, 15 May, 2018, 1:27pm
Russian President Vladimir Putin on Tuesday is set to unveila19km bridge linking southern Russia to the Crimean peninsula annexed from Ukraine,ahighly symbolic project he has personally championed.
Known as the Crimean Bridge, it will be the longest not only in the country but also in Europe, overtaking the Vasco da Gama Bridge in Lisbon.
Built atacost of 228 billion roubles (US$3.69 billion), the new structure connects the southern Krasnodar region with the Crimean city of Kerch, spanningastrait between the Black Sea and the Azov Sea.
Ukraine has condemned the project saying construction has damaged the environment and that larger ships will be unable to get through to its ports on the Azov Sea.
♩ ♪ ♬ လွတ်ပြီတဲ့ဟေ့.. လွတ်ပြီ..။ ♩ ♪ ♬
Ministry of Foreign Affairs Myanmar
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံများ (LDC) အဆင့်မှ လွတ်မြောက်ရေးဆိုင်ရာ စံနှုန်း (၃)ခုလုံးနှင့် ပထမအကြိမ် ပြည့်မီကြောင်း CDP ထုတ်ပြန်
(၁၈-၅-၂၀၁၈ ရက်၊ နေပြည်တော်)
မြန်မာနိုင်ငံသည် ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံများ (LDC) အဆင့်မှ လွတ်မြောက်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် စံနှုန်း (၃)ခုစလုံးနှင့် ပထမဆုံးအကြိမ် ပြည့်မီလာပြီဖြစ်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မူဝါဒဆိုင်ရာ ကော်မတီ (CDP) ၏ အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါကိစ္စအား နယူးယောက်မြို့ရှိ ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်၌ ၁၉-၄-၂၀၁၈ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ကုလသမဂ္ဂ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးကောင်စီ (UN ECOSOC) ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မူဝါဒဆိုင်ရာကော်မတီ (CDP) ၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ အစည်းအဝေးအစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ အစီရင်ခံစာအရ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သုံးနှစ်တစ်ကြိမ် လေ့လာသုံးသပ်မှု (Triennial Review) တွင် ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံများ (LDC) အဆင့်မှ လွတ်မြောက်ရေးစံနှုန်းများအဖြစ် တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေ (Gross National Income – GNI) အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁,၂၃၀ ထက် ကျော်လွန်ရန် ၊ လူသားအရင်းအနှီးညွှန်းကိန်း (Human Access Index – HAI) ၆၆ နှင့် အထက်ရှိရန်နှင့် စီးပွားရေး ထိခိုက်နစ်နာလွယ်မှုဆိုင်ရာ ညွှန်းကိန်း (Economic Vulnerability Index -EVI) ၃၂ နှင့် အောက်ရှိရန် လိုအပ်ကြောင်း သတ်မှတ်ထားပါသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် သုံးနှစ်တစ်ကြိမ် လေ့လာသုံးသပ်မှုတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် GNI အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁,၂၅၅၊ HAI ၆၈.၅ နှင့် EVI ၃၁.၇ ရရှိခဲ့သဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံများ အဆင့်မှ လွတ်မြောက်ရေးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်စံနှုန်း (၃) ခုလုံးနှင့် ပြည့်မီသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံတင်ပြခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံများ စာရင်းဝင် ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း လွတ်မြောက်ရေးဆိုင်ရာစံနှုန်း (၃)ခုလုံးနှင့် ပထမဆုံးအကြိမ် ပြည့်မီခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် လက်ရှိ တိုးတက်မှုအရှိန်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း၍ လာမည့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် Triennial Review တွင် စံနှုန်း (၃)ခုအနက် အနည်းဆုံး (၂)ခုနှင့် ဆက်လက်ပြည့်မီပါက ယင်းနှစ်များနောက်ပိုင်းတွင် ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံများ စာရင်းမှ လွတ်မြောက်မည့် လမ်းစပွင့်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
For Putin’s 4th Term, MoreaCoronation Than an Inauguration
MOSCOW — Vladimir V. Putin took the oath of office on Monday forafourth term as Russia’s president, inaceremony staged inagilded Kremlin hall once used to crown czars and replete with pageantry, highlighting his vast accumulation of authority after nearly two decades in power.
Karl Marx 200th anniversary: The world is finally ready for Marxism as capitalism reaches the tipping point
The philosopher predicted that centralisation would lead to revolution and give birth toapost-capitalist society – globalisation has led us to that point
Youssef El-Gingihy @ElGingihy Friday4May 2018 23:00 BST183 comments
Two hundred years ago on5May 1818, Karl Marx was born in the German town of Trier on the banks of the river Moselle.
The world’s largest social network is adding dating app features
By Nick Statt@nickstatt May 1, 2018, 1:30pm EDT
Facebook is addingadating layer to its main mobile app, CEO Mark Zuckerberg announced today during the company’s F8 developer conference keynote in San Jose, California. The features arealong time coming for the 14-year-old social network, which has allowed users to broadcast whether they’re single or inarelationship since it first went live in February 2004.
သမ္မတမှသည် မင်းသားကြီးအိုဘားမား သို့
May 22, 2018, cbsnews.com
Barack and Michelle Obama sign film, series production agreement with Netflix
Former President Barack Obama and former first lady Michelle Obama have signedamulti-year agreement to produce films and series for Netflix, the streaming service announced Monday inatweet.
The deal potentially includes scripted series, unscripted series, docu-series, documentaries and features. Netflix said inastatement that the content will be available to its 125 million members in 190 countries.